किन गर्भावस्था को समयमा hemostasiogram
रगत सामान्य कामकाज र मानव शरीर को विकास गर्न योगदान जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसैले यो अध्ययन गर्भावस्था को समयमा hemostasiogram धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईं गर्भावस्था को समयमा कुनै पनि असामान्यताहरु पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। जहाँ preeclampsia को विकास को लागि एक शङ्काको छ, वा छैन यो अध्ययन अवस्थामा गरियो गर्भपात खतरा।
गर्भावस्था को समयमा hemostasiogram प्रतिनिधित्व गर्ने विवरण विचार र यो किन बाहिर गर्नुपर्छ। Hemostasiogram, सञ्चालन, साथै गर्भावस्था सञ्चालन गर्दा यी अवस्थाहरू रगतको केही हानि समावेश किनभने जो आवश्यक छ, hemostasis विश्लेषण भनिन्छ (रगत clotting)। रगत clotting सुरक्षा, तापमान नियन्त्रण, रगत को खाना र परिवहन कार्य, बारी मा एक स्वस्थ यसको सञ्चालन implies जो को कार्यान्वयन उद्देश्य शरीर प्रतिक्रिया छ र गर्भावस्था को समयमा भ्रूण को सामान्य विकास सुनिश्चित गर्दछ। यस प्रक्रियाको उल्लंघन जीवन र स्वास्थ्य नतिजा यस्तो स्ट्रोक वा घनास्त्रता रूपमा खतरनाक entails। माथि वर्णन गरिएको छ डिकोड जो Hemostasiogram त्यसैले, यो सबै गर्भवती महिला को विश्लेषण लागि आवश्यक छ।
गर्भवती महिलाका लागि hemostasiogram यो dissemirovannogo intravascular coagulation (DIC) रगत, जुन रक्तलायी आघात विकास हुन सक्छ को खतरा भने पहिचान र मृत्यु को लागि नेतृत्व गर्न मद्दत गर्छ, ठूलो महत्व छ placental abruption र postpartum रक्तस्राव।
जब गर्भावस्था hemostasiogram, तथ्याङ्कले रगत clotting मा वृद्धि संकेत जो, एक अनिवार्य प्रक्रिया हो। आगामी जन्म लागि तयारी मा एक महिलाको शरीर, रगत को एक सम्भव हानि लागि तयार छ, त्यसैले यो सर्वेक्षण को परिणाम विशेष महत्त्वपूर्ण छन्।
यो विश्लेषण हामीलाई prothrombin र fibrinogen को स्तर निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले, तपाईं postpartum रक्तस्राव को likelihood वृद्धि prothrombin को स्तर, परिवर्तन भने, यो रगत clotting कारण छ कि पदार्थ परिचय त्यसैले उपयुक्त छ। परिवर्तन निर्धारित प्लाज्मा आधान fibrinogen गर्दा। यसरी, आक्रान्त र घनास्त्रता अन्त्य देखि लिएर गर्भावस्था को समयमा pathologies को गठन गर्न नेतृत्व कि hemostatic विकार, दुई तरिकामा छन्।
यसरी, रक्तस्राव को गठन सँग सम्बन्धित जटिलताहरू, ठाउँ मा fibrinogen को गठन placental संलग्न को प्रक्रिया मा बदलाव परिणाम। रगत थक्के को गठन सम्बन्धित जटिलताहरू, व्यापक भयो, तिनीहरूले placental जहाजहरू घनास्त्रता नेतृत्व।
तपाईं गर्भावस्था को समयमा hemostasiogram मुख्यतया गर्ने बाल-असर केही समस्या महिला नियुक्त गरिएको छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यसलाई hemostasis विश्लेषण, र यदि आवश्यक, को भ्रूण को विकास असर छैन भनेर दबाइ निर्धारित लागूपदार्थ आयोजित।
उपचार सामान्य रगत clotting को रिकभरी सुविधा एस्पिरिन, metipred हेपरिन, साथै अन्य लागूपदार्थको संग सुधारात्मक चिकित्सा को माध्यम द्वारा बाहिर छ। यो placental अपर्याप्तता को रोकथाम पूरा गर्न आवश्यक पनि छ।
यसरी, गर्भावस्था को समयमा hemostasiogram बाहिर हरेक तीन महिना एक पटक लगे, र सामान्य प्रदर्शन विश्लेषण, थप अक्सर विचलनको मामला मा छ। यो विश्लेषण बिहान खाली पेट मा बाहिर छ। अध्ययन सबै महिला, गर्भावस्था जो जटिलताहरू संग हुन्छ, वा जो जोखिममा छन् नियुक्त गरिएको छ। प्रारम्भिक उपचार जसबाट सामान्य श्रम सुनिश्चित, रगत clotting पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्छ।
के गर्भावस्था को2हप्ता मा शरीर हुन्छ
Diamnioticheskaya monochorionic जोडाहरू। monochorionic जोडाहरू
यो सबैभन्दा opportune क्षण हो जब म, ovulation पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्?
कसरी लुगा संग dandelions को एक स्थान ल्याउन?
ताजा पेय। चिया, कफी, ऊर्जा - राम्रो छ?
लेव Semenovich Pontryagin, सोभियत गणितज्ञ: जीवनी, वैज्ञानिक क्यारियर
Kamenskiy Valeriy Viktorovich: स्पोर्ट उपलब्धिहरू र जीवनी
राज्य वा सम्पत्ति मा खरीद देखि भूमि को लीज? यसलाई थप लाभदायक छ?
स्वाद एक किसिमको ऐसेलु muffin: muffin नुस्खा
Gallstone रोग को आक्रमण को लक्षण। पहिलो सहायता प्रदान कसरी गर्ने?
खुखोलहो ... को अर्थ विभिन्न प्रकारका छन्
सुन्दर बान्की सुई लागि ढक्कन: योजना र वर्णन